Masjiidota Magaalaa Istee keessatti gubaman deebisanii ijaaruuf deeggarsi godhame - NuuralHudaa
Masjiidota Magaalaa Istee keessatti gubaman deebisanii ijaaruuf deeggarsi godhame
Naannoo Amaaraa kibba Gondar magaalaa Isteetti masjiidonni lama, akkasumas magaalaa Jarraa Gadduu jedhamtutti masjiidni tokko walumaa galatti masjiidonni sadi, torbee tokkotti hordoftoota amantaa birootiin gubamuu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Masjiidota qaamota jibbiinsa Islaamummaa leellisaniin gubame kana ilaalchisee mootummaa irraa tarkaanfiin fudhatame jiraatuu dhabus, ummanni masjiidota isaa deebisee ijaaruuf sochii jalqabee jira. Haaluma kanaan guyyaa hardhaa dhalattoonni Istee magaalota Bahirdaarii fi Dabra Taaboor keessa jiraatan, masjiidota gubaman deebisanii ijaaruuf deeggarsa maallaqa kuma dhibba lamaa fi Kuma shantama, akkasumas Simintoo kuntaala 100 kan gumaachan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Muslimaa magaalaa Jarraa Gadduutis, masjiida alhada dheengaddaa gubame deebisanii ijaaruuf maallaqa walitti qabaa jiraatuu gabaafame.
Magaalaa Bahir DaarNaannoo Amaaraa
July 6, 2022 sa;aa 6:41 am Update tahe